अनलाइन बजार दराज र सामसंगबीच सम्झौता, सामसंग ग्यालेक्सी एफ २२ को प्रि-बुकिङ सुरु गर्ने – Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.
अर्थ सरोकार खास खबर
सेयर बजार विशेष
काकासँग सेयरका कुरा
साथीसँग बीमाका कुरा
अनलाइन बजार दराज र सामसंगबीच सम्झौता, सामसंग ग्यालेक्सी एफ २२ को प्रि-बुकिङ सुरु गर्ने
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार दराजले सामसंग नेपालसंग साजेदारी गरि नयाँ ग्यालेक्सी एफ २२ (Samsung Galaxy F22 ) को प्रि-बुकिङ्ग सुरु भएको घोषणा गरेको छ । ग्यालेक्सी एफ २२ को लन्चसँगै सामसंगको एफ सिरिज नेपालमा पहिलो चोटी भित्रिदैछ । ग्राहकहरुले अब दराज एपमार्फत श्रावन ६ देखि ग्यालेक्सी एफ २२ को प्रि-बुकिङ्ग गर्न सक्नेछन् । सामसंग ग्यालेक्सी एफ २२ अक्टा कोर मिडियाटेक हिलियो जी ८० प्रोसेसोरले सुसज्जित छ र यसमा दुई कर्टेक्स ए ७६ कोर र छ कर्टेक्स ए ५५ कोर (two cortex A76 cores and six Cortex A55 cores) रहेको छ ।
शक्तिशाली र सुदृढ प्रदर्शन यो फोनको आकर्षण हो । यसैगरि सामसंग ग्यालेक्सी एफ २२ को डिस्प्लेको कुरा गर्दा यो फोन मा ६.४ यच डि इन्फिनिटी-यु सुपर आमोलेड डिस्प्ले रहेको छ भने त्यो डिस्प्ले कोर्नारिंग गोरिल्ला ग्लास ५ मार्फत सुरक्षित राखिएको छ । येसैगरि ग्यालेक्सी ग्यालेक्सी एफ २२ एन्ड्रोइड ११ र वान यु आई कोर ३१ मा चल्छ । यसले प्रयोगकर्ताहरुलाई सरल डिजाइन दिनुको साथै फोनलाई आफुले अनुकुल बनाउन सकिन्छ । सुरक्षाको लागि फोनको छेउपट्टि फिंगर प्रिन्ट स्क्यानर र अगाडीको क्यामेरामा फेस अनलकको फिचर उपलब्ध छ ।
क्यामेराको कुरा गर्दा ग्यालक्सी एफ २२ मा क्वाड क्यामेरा सेटअप रहेको छ जसमा ४८ यम पी वाइड क्यामेरा, ८ यम पी अल्ट्रा वाइड क्यामेरा, २ यम पी म्याक्रो क्यामेरा, २ यम पी देप्थ साथै फ्ल्याश, प्यानारोमा र यच डि आर जस्ता अन्य फिचर्सहरु रहेको छ । यो क्वाड सेटपले सुन्दर तस्बिर र हाई रेजोलुसन भिडियोहरु खिच्न सरल रुपमा सम्भब बनाउदछ । साथै, फ्रन्ट क्यामेरा ८ यम पीको रहेको छ जसबाट स्पष्ट र प्राकृतिक फोटोहरु सजिलैसंग खिच्न सकिन्छ । क्यामेराका थप अन्य विशेषताहरु भने फूड मोड, हाइपरल्याप्स, स्लो मोशन, एआर जोन र प्रो मोड रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
अब सामसंग ग्यालेक्सी एफ २२ श्रावन ३ ९ जुलाई २१० देखि दराजमा प्रि-बुकिङको लागि उपलब्ध हुनेछ भने ९ श्रावन (२७ जुलाई) देखि शिपिंगका लागि उपलब्ध हुनेछ । दराजले अहिले नेपालका ४७ भन्दा बढी शहरहरूमा डेलिभर गर्दछ र दराज मार्फत तपाईले यो फोन आफ्नो घरको ढोकामै मगाउन सक्नुहुन्छ । एक वर्षको ब्रान्ड वारनटि, १४ दिन रिटर्न पोलिसीको पनि ग्राहकहरुले मज्जा लिन सक्नेछन् । येसैगरि, ग्राहकहरूले ग्यालक्सी एफ २२लाई दराज मार्फत ०५ ब्याज ईएमआइ (EMI) मा पनि खरीद गर्न सक्दछन् ।
ग्यालेक्सी दुई एफ २२ भेरियेण्टमा उपलब्ध छ ( ४ जीबी राम र ६४ जीबी स्टोरेज, र ६ जीबी राम र १२ जीबी स्टोरेज । ४ जीबी को मूल्य रहेको छ २०,४९९ भने ६ जीबी को मूल्य छ २३,९९। ग्यालक्सी एफ २२ कालो र लाईट ब्लुमा उपलब्ध छ । यसैगरि दराज महाबचात बजार मा खरिद गरे थप छुट हरु प्राप्त गर्न सक्छन् । महाबचत बजारमा कुनै पनि सामान खरिद गरे ग्राहकहरुले म्याक बुक प्रो १३ पनि जित्ने मौका पाउनेछन् । आजै दराज एप डाउनलोड गर्नुहोस् र नयाँ सामसंग ग्यालेक्सी एफ २२ प्रि-बुकिङ गर्नुहोस् ।
याक बिक्री नहुँदा आर्थिक सङ्कट खेप्दै व्यवसायी, ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला र याङ्मा क्षेत्र बढी प्रभावित
नेपाल राष्ट्र बैंकमा खुल्यो ६३ जनाको लागि रोजगारी, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
बन्दीपुरमा गाउँपालिकाद्वारा दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान, जति उत्पादन गर्यो त्यति फाइदा हुने
देश बोल्ने फोटो कथा : बाजुरास्थित बैंकमा सेवाग्राही कोरोनाको उच्च जोखिममा, म्याग्देको ट्रि हाउसमा रमाउँदै आन्तरिक पर्यटक
फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जाप्रति स्थानीयवासी असन्तुष्ट, यस्तो छ कारण
विकास बजेट कटाएरै भएपनि खोप खरिद गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता
क्लब हाउसमा चर्काचर्की : एनआइसीएल बुम-बुम भन्दा ‘डुङ-डुङ’ उफ्रिएको बहस के थियो ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
देउवा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने, करको दर यथावत रहने, अरु के के हुन्छ परिवर्तन ?
सेयर लगानीकर्ता नझुक्कीनुहोस् है ! बजारमा ‘मेरो लगानी’का नाममा चल्दैछ यस्तो नक्कली धन्दा ! (प्रमाणसहित)
थाहा पाउनुभयो ? धेरैपछि काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महसुस
नबिल बैंक लिमिटेडको ‘बाउन्स चेक’ दिने एक प्रतिवादी पेप्सीकोलाबाट पक्राउ, ३ दिन कैद र १४ लाख रुपैंयाँ जरिवाना
सनराइज बैंकद्धारा नयाँ सेवाको सुरुवात, कार्डको प्रयोग बिना नै एटीएमबाट रकम झिक्न सकिने
कालिका लघुवित्तमा सीइओका काण्डै काण्ड, खराब कर्जा लुकाए, दोहोरो भत्ता पचाए, छोरालाई जागिर खुवाए (प्रमाणसहित)
सिद्धार्थ बैंकको प्रणालीमा समस्या :दिनदहाडै यसरी चोरियो ४२ लाख, बचतकर्ताको बचत कति जोखिममा छ ?
सेञ्चुरीको सीइओ बन्न लागेको चर्चाबारे खड्का भन्छन्, ‘जसले भन्यो, त्यो वेवकुफ हो, त्यस्तो डुब्न लागको बैंकमा को जान्छ ?’
अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा [email protected] मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।